Global Voices teny Malagasy » Ireo fiara raitra an’ny filoha lefitra Tindorin Obiang, namidy amin’izay sahy lafo indrindra, hamatsiana vola ny fampandrosoana ao Guinée équatoriale · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Novambra 2019 8:12 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Mainty, Eoropa Andrefana, Brezila, Etazonia, Frantsa, Ginea Ekoadaoreana, Soisa, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Pikantsary tamin'ny fanadihadiana France 24 naompana tamin'i Obiang, azo raisina ao amin'ny YouTube
Fantatra amin'ny fomba fiainany tia miliba , vao avy nifatraran'ny felaka ara-pitsarana sy ara-politika i Teodoro Nguema Obiang Mangue  , filoha lefitra ao Guinée Equlatoriale, taorian'ny nangiazan'ny manampahefana soisa sy namarotana ho an'izay sahy lafo indrindra ny 25 tamin'ireo fiarany raitra. Ny vokatra azo tamin'io varotra io dia ho alefa hamatsiana asa fampandrosoana any amin'ny firenena iray izay ny ankamaroan'ny mponina ao aminy dia mitolona mba ho velona miaraka aminà vola tsy ampy iray dolara akory isanandro .
Fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Tindorin, hatry ny ela ity mpanao politika ity no nisitraka fiarovana henjana nahafahany nandositra ny fitsaràna taorian'ireo fiampangana marobe natao azy ho nanodinkodina volambahoaka. Raha ny marina, izy dia zanakalahin'ny filoha Teodoro Obiang Nguema Mbasogo , izay nitantana ny firenena ho teo ambany vahohony nandritra ny 40 taona mahery.
Kanefa, taorian'ny taona maro nisitrahany ny tsimatimanota, vitan'ny fitsaràna iraisampirenana ihany ny nanomboka ireo dingana tany aminà firenena maro, araka ny tatitra 2019.  navoakan'ny Human Rights Watch (HRW) fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, mpiaro ny zo maha-olona. 
Iray amin'ireo vokatr'io fanadihadiana erantany io, ny 29 Septambra lasa teo, ny famarotana ho an'izay sahy ambony indrindra ireo fiara 25 raitra tao Zeneva, nahazoana maherin'ny 18 tapitrisa dolara
Manome  antsipirihany momba io varotra ho an'ny sahy ambony io ny tranonkala coupsfrancs.com :
Ferrari 7, Bentley 5, Maserati 1 ary Aston Martin 1 no isan'ny hita tao anatin'ny katalaogy tamin'ity varotra ity izay natao tamin'ny 29 Septambra tao Zeneva. Rakitra sarobidy novinavinaina ho 17 tapitrisa euros mahery : ny fehezana faran'izay lafo indrindra dia ny an'ireo fiara lafo vidy indrindra niisa 2: Lamborghini Veneno Roadster 1 niloko fotsy matromatroka namidy 5 tapitrisa euros, sy Ferrari hybride 1 miloko mavo namidy 2,5 tapitrisa euros…
Tsy tanisaina intsony ireo vala fiarakodia any amin'ireo firenena eoropeàna hafa sy ao Guinée Équatoriale izay anangonan'i Teodorin ireo karazana fiara sy moto raitra rehetra.
Momba ny hampiasàna ireo vola indray, ny tranonkala africanews.com no manazava  ny dingana arahana:
Nambaran'ireo mpampanoa lalàna tao Zeneva, tamin'ny Febroary, fa nofaranan-dry zareo ny fanadihadiana iray momba an'i Teodoro Nguema Obiang ho nanao famotsiambola sy fanodinkodinana volambahoaka, ary nampiarahan-dry zareo tamin'izany ny fifanarahana mitodika amin'ny hanaovana varotra ho an'izay sahy ambony an'ireo fiara mba ho famatsiana vola ireo fandaharanasa sôsialy any amin'io firenena ao Afrika Andrefana io.
Olana iraisampirenena nanao tohivakana
2017, nihatery ny làlan-kizoran'i Obiang. Tao Frantsa, Oktobra 2017, voaheloka izy ho nanao famotsiambola,  nahazoany sazy famonjàna 3 taona sy fandoavana vola 30 tapitrisa Euros, sazy mihantona, ary koa fangiazana manontolo ny fananany teo amin'ny tany frantsay, vinavinaina ho 150 tapitrisa euros, araka ny lazain'ny tranonkalan'ny transparency-france.org . Ny dingana fandravàna didy momba io dia hatao ny Desambra 2019.
Vakio koa: Teodorín N. O. Mangue, zanakalahin'ny filoha ao Guinée Equatoriale miatrika fitsaràna any Parisy 
Io taona io ihany, nosamborina izy teo am-pahatongavany tao Brezila noho ny tsy nanaovany fanambaràna mikasika ny volabe nentiny. Araka ny marihan’ ilay bilaogera, Hippolyte Gourmantier, ao amin'ny confidentielafrique.com, tsy araka ny niheverany azy no nizoran'ny zavatra rehetra:
Vola 1,5 tapitrisa dolara tanaty valizy iray sy famantaranora lafo vidy mitentina 15 tapitrisa dolara tao anatin'ny iray hafa an'ilay Filoha lefitra no nogiazan'ny polisy federaly breziliàna.
Firenena manankarena saingy kikisan'ny kolikoly
Firenena laharana fahatelo amin'ny famokarana solitany aty amin'ny faritra Afrika ambanin'i Sahara i Guinée équatoriale, manana mponina 1,2 tapitrisa. Saingy tsy misitraka io tombony ara-toekarena io ireo vahoaka ao aminy: araka  ny Banky Afrikàna ho an'ny Fampandrosoana (BAD) nandritra ny vanimpotoana 2015-2018, “nidina nanakaiky ny 29% ny tena harinkarena faobe (PIB) tao Guinée Équatoriale, taorian'ireo taona efatra nisesy nisian'ny fitontonganana nateraky ny fidinan'ny vidin'ny solika sy ny tsy fisian'ny fanamaroana rantsana ny toekareny. Tamin'ny 2017, niankina be tamin'ny solika ny toekareny, ny 56% tamin'ny harinkareny faobe, 95% tamin'ny fanondranana ary 80% tamin'ny famorianketra”.
Ny kolikoly no tena olana fototra: ao anatin'ny tondro momba ny kolikoly ho an'ny taona 2019 navoakan'ny Transparency International, mitana ny laharana faha-172 amin'ireo firenena 180 notsirihana i Guinée équatoriale. Ara-teoria, ny vola miditra amin'ny tsirairay dia tokony ho 7,050 dollars  amerikàna, araka ny fanadihadiana nataon'ny Banky Iraisampirenena. Kanefa ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka no miaina fahantràna lalina. Ny fahelàna velona eo am-pahaterahana, izay 57,65 taona  tamin'ny 2014, dia any ambanin'ny salanisa manerana an'i Afrika , izay eo amin'ny manodidina ny 59,60 taona . Ilay senagaly mpanao gazety ara-tontolo iainana, Moctar Ficou, manaitra  ao amin'ny vivafrik.com fa hoe tsy manana rano fisotro efa ho telo herinandro izao i Bata, ilay tanàna lehibe indrindra ao Guinée équatoriale.
Ny toejavatra toy izany no manazava ny antony mahatonga ireo teratany gineàna marobe handao ny fireneny. Tao anaty lahatsoratra iray nosoratan'ilay gineàna mpanohitra, Abeso Ndong Salomon, dia niampanga  ny jadona tsy misy antra, ny kolikoly ary ny fitantanana ratsy ny fananambahoka, izay nanosika olona miisa 250.000 avy tao Guinée Equatoriale handositra ny fireneny:
Aleo tsiahivintsika mba ho ao anaty tsiaron'ny filoha OBIANG, fa noho ny jadona no niteraka ny fifandramonin'ireo olona 250.000 niala teto Guinée Equatoriale, noho ny fihazàna nandritry ny 39 taona nataon'ny fitondrana an'ireo mpanohitra ka nanosika azy ireny hanao sesitany ny tenany mba tsy ho faty vonoina na ho angalarina ny fananany rehetra…
Ny kolikoly nampiharin'ny fitondran'ny filoha OBIANG no nitsentsitra sy nanao rapa-dango ny haren'ny firenena, izay tsy nisitrahan'ny vahoaka akory satria ny fianakavian'ny filoha irery ihany no nitroka io harena io ho an'ny tombontsoany.
Tanatin'izany toejavatra izany no naroso ho mpisolo an-drainy i Teodorin Obiang. Ny faran'ny Novambra 2018, efa niatrika ny filankevitry ny governemanta voalohany notarihany izy, araka ny lahatsoratr'i Rodrigue Loué navoaka  tao amin'ny fr.africanews.com. Sy araka ny fanamarihan'ilay  ivoariàna bilaogera, Stéphane Blankson:
Dia mbola hisy ihany izao olona hijoro hiaro ny karazan'olona tahaka izany, noho ny amin'ny maha-samy afrikàna sy ny ady amin'ny imperialisma sy ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao ary amin'ny anaran'ny fiandrianampirenen'ireo firenena afrikàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/10/143857/
 fomba fiainany tia miliba: https://www.jeuneafrique.com/585471/politique/guinee-equatoriale-lexuberant-anniversaire-de-teodorin-obiang/
 Teodoro Nguema Obiang Mangue: https://fr.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Nguema_Obiang_Mangue
 miaraka aminà vola tsy ampy iray dolara akory isanandro: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale
 filoha Teodoro Obiang Nguema Mbasogo: https://fr.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Obiang_Nguema_Mbasogo
 tatitra 2019.: https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325967
 no manazava: https://www.africanews.com/2019/10/01/equatorial-guinea-vp-s-supercars-sold-for-27m-at-swiss-auction/
 Teodorín N. O. Mangue, zanakalahin'ny filoha ao Guinée Equatoriale miatrika fitsaràna any Parisy: https://fr.globalvoices.org/2017/06/28/212005/
 7,050 dollars: https://donnees.banquemondiale.org/pays/guinee-equatoriale
 57,65 taona: https://www.populationdata.net/pays/guinee-equatoriale/
 59,60 taona: https://www.populationdata.net/continents/afrique/
 dia niampanga: https://blogs.mediapart.fr/abeso-ndong-salomon/blog/041118/la-migration-des-africains-vers-leurope-obiang-fait-fuir-250000-equato-guineens
 navoaka : https://fr.africanews.com/2019/09/30/suisse-les-25-voitures-de-luxe-de-teodorin-obiang-vendues-a-216-millions-d-euros/